Maareeyaha wakaalada biyaha ee Galkacyo oo sheegay in 4-ta ceel ee biyaha ee magaaladu ay hadda wada shaqaynayaan. – Radio Daljir
Maareeyaha wakaalada biyaha ee Galkacyo oo sheegay in 4-ta ceel ee biyaha ee magaaladu ay hadda wada shaqaynayaan.
Janaayo 11, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, Jan 11 – Fu’aad Abshir Xasan, Maareeyaha wakaalada biyaha ee magaalada Galkacyo ayaa sheegay in ceelasha biyaha ee magaaaladu ay hadda wada shaqaybanayaa, 2-dii ceel ee hore ciladdu u saamaysayna la cillad bixiyey. Md. Fu’aad waxaa uu sheegay in biyaha magaaladu ay hadda si buuxda u wada shaqaynayaan, ayna dabooli doonaan baahida dadka. http://daljir.com/
Abaanduulihii ciidanka Somaliland ee gobolka Cayn oo is-casilay.